Trump: “Aniga oo aan dhib badanba u marin ayaan boqorka dalka Sacuudiga taleefon kaga soo dhacsaday $500 milyan. – Xeernews24
Trump: “Aniga oo aan dhib badanba u marin ayaan boqorka dalka Sacuudiga taleefon kaga soo dhacsaday $500 milyan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kala ku jees jeesay Boqorka Sacuudiga Salman, waxaana arrintaan si weyn looga hadal hayaa Baraha Bulshada.
Donald Trump ayaa sheegay inuu Shan Boqol oo Milyan oo si aan dhib laheyn uga qaatay Boqorka Sacuudiga kadib markii uu u diray Taleefoon.
Trump ayaa Boqorka Sacuudiga qadka Taleefoonka uga sheegay inay Mareykanka sanad kasta ku bixiyaan ilaalinta Sacuudiga illaa 4.5 bilyan oo doolar hadda wixii ka dambeeyana uusan sii wadi karin.
Trump oo ka hadlayay isu soo baxa hal ku dhigiisu yahay “Make America Great Again” ayaa sheegay in Sacuudiga ay yihiin xulafo wanaagsan oo dhaqaale badan soo geliyay shirkadaha Mareykanka, isagoo sheegay inuusan marnaba xidhiidhka u jarin doonin dalkaas.
Wuxuu sheegay inay jiraan dad badan oo Mareykanka kula talinayo in xidhiidhka loo jaro balse wuxuu Trump sheegay inay Sacuudiga tahay Saaxiib lacag badan leh oo aan xidhiidhka loo jari karin.
“Waxa kaliya ee ay heystaan waa lacag caddaan ah, waxay naga iibsadaan waxyaaba badan, horayna waxay nooga iibsadeen 450 bilyan oo doolar”, sidaas waxa yidhi Donald Trump.
Trump oo ka sheekeenayo wixii dhex maray isaga iyo Boqorka Sacuudiga ayaa yidhi:
” Boqor Salmaan waxaa ku idhi 4.5 Bilyan oo lacagta Mareykanka ah ayaa sannad kasta kugu ilaalinaa, taas masii wadi karno wixii hadda ka dambeeyo, sababatoo ah waa waali, markaan sidaas ku idhi Boqor Salman wuu xanaaqay, wuxuu igu yidhi sidaan cadaalad maahan, anigana waxaa ugu jawaabay waa caddaalad, hadaladaas kulul kadib wuxuu Boqorka igu yidhi waxaan ku siinayaa 500 oo Milyan oo Dollar, waxaana ugu jawaabay lacagtaas way yar tahay waxaan u baahanay intaas ka badan” ayuu yidhi Trump oo u khudbeenayey dadweyne farabadan.
Trump oo u muuqday inuu ku faanayo lacagta tirada badan ee uu ka helay Sacuudiga ayaa sheegay inay ugu dambeyntii isaga iyo Boqorka heshiiyeen uuna ka qaatay lacagtii Shanta Boqol ee Malyan aheyd.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inay Sacuudiga ka qaadi karaan lacag intaas ka badan maadaama uu sheegay inuu intaas oo lacag ah oo kaga helay hal wicitaan oo kaliya haddii uu Cadaadis saarana uu ka heli karo lacag xad dhaaf ah.
Trump ayaa tan iyo markii uu xilka Madaxweynimo ee Mareykanka qabtay wuxuu caadi ka dhigtay inuu ceebeysto Madaxda Dalka Sacuudiga oo iyaga ah kuwa ka dambeeyo reer Galbeedka iyo Dowladaha waaweyn ee aan Islaamka aheyn halka kuwa Islaamka ahna ay cadaadis xoog leh saaraan.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/04/Trump-Arabman.jpg 300 720 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-04-30 17:27:032019-04-30 17:27:03Trump: “Aniga oo aan dhib badanba u marin ayaan boqorka dalka Sacuudiga taleefon kaga soo dhacsaday $500 milyan.
maxaa ka jira in Sacuudigu Shidaal Ka Qodanaayo Gudaha Muqdisho ay dawladda... Majirto cid ka bad baadaysa xasuuqa kasocda Galbeedka Gobolka Sitti.